Hordhac: Barcelona Vs Real Madrid: Los Blancos Camp Nou Oo Ay Ku Badiso Kulan Super Cup Ah 1990 Ayaa Ugu Dambaysay – Kooxda.com
Home 2017 August Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino Hordhac: Barcelona Vs Real Madrid: Los Blancos Camp Nou Oo Ay Ku Badiso Kulan Super Cup Ah 1990 Ayaa Ugu Dambaysay
Hordhac: Barcelona Vs Real Madrid: Los Blancos Camp Nou Oo Ay Ku Badiso Kulan Super Cup Ah 1990 Ayaa Ugu Dambaysay
Indhaha taageerayaasha Adduunka ayaa caawa u jeedsan doona garoonka Camp Nou halkaas oo ay ka dhici doonto kulanka El Clásico kana tirsan lugtii 1-aad ee Super cup-ka Spian.
Kooxda Real Madrid oo ku soo guulaysatay koobka Super cup-ka Yurub ayaa isha ku haysa in ay natiijo fiican kala baxdo lugta 1-aad ee ay ku ciyaari doonto garoonka Camp Nou.
Dhanka kale kooxda Barcelona ayaa doonaysa in ay guul ku gaarto garoonkeeda si ay u sii noolayso rajadeeda ku guulaysiga koobka Super cupka Spain.
Real Madrid ayaa kulankan raadin doonta guusheedii ugu horaysay ee super cupka tan iyo sanadkii 1990 wakhtigaas oo ay Barcelona uga badisay 1/0.
Tartanka: Spain Super Cup
Kooxda Barcelona ayaa ah kooxda ugu guulaysiga badan Super Cup-ka Spain iyaga oo ku guulaystay 13 jeer halka ay Real Madrid oo kaalinta labaad ku jirta ku guulaysatay 9 jeer.
Real Madrid ayaan kooxd Barcelona guul ka gaarin 4-tii kulan ee ugu dambeeyay ee xiriirka ahaa ee super cup-ka Spain ee ay Kula Ciyaartay garoonkeeda Cam Nou guushii ugu dambaysay ayaa yimid sanadkii 1990.
Barcelona ayay guuldaro soo gaartay saddexdii kulan ee ka midka ahaa 14-kii kulan ee ugu dambeeyay ee ay Real Madrid kula ciyaarto garoonka Camp Nou ee tartamada oo dhan ah, halka ay Barcelona badisay 7 kulan, waxana ay bar-baro galeen 4 kale.
10-kii kulan ee ugu dambeeyay ee El Clásico ah waxa la kala dhaliyay 39 gool taas uu u dhiganta 4 gool kulan kasta, xilli ay Barcelona dhalisay 22 gool Halka Real Madrid dhalisay 17 gool.
Kooxda Barcelona ayaa shabaqa kooxda Real Madrid soo taabatay 23 jeer oo xiriir ah tartamada oo dhan waana rikoorkii ugu fiicnaa taariikhda El Clásico-da.
Lionel Messi ayaa ah gool dhaliyaha ugu fiican kulamada El Clásico-da isaga oo dhaliyay 23 gool tartamada oo dhan isaga oo laba gool dhaliyay kulankii ugu dambeeyay ee ay wada ciyaaraan labada kooxood wada ciyaareen.
Real Madrid ayaa heshay 12 kaar cas 28-kii kulan ee ugu dambeeyay ee El Clásico ee tartamada oo dhan ah halka ay Barcelona heshay 5 kaar oo cas, daafaca Sergio Ramos ayaa helay 5 kaar oo ka mid ah 12-ka ay Real Madrid heshay.
Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay 10 gool intii uu ku ciyaaray garoonka kooxda Barcelona ee Camp Nou ee tartamada oo dhan halka uu Lionel Messi dhaliyay 14 gool oo uu ku dhaliyay Santiago Bernabéu.